ဘုရားသခင်နဲ့ပက်သက်တဲ့အခြေခံသမ္မာတရားလေးချက် | The Blue Book
ကမ္ဘာကြီးကို ထိန်းထားပေးထားတဲ့ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားလိုမျိုး ရူပဗေဒနဲ့ဆိုင်တဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေရှိသလိုပဲ, ဘုရားသခင်နဲ့ဘယ်လိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပက်သက်ပြီး သမ္မာတရားနဲ့ညီပြီး အခြေခံကျတဲ့ အဖြေရှိနေပါတယ်
ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုချစ်ပြီး သင့်ဘဝအတွက် အံ့ဩဖွယ်ရာ အကြံအစည်တွေရှိတယ်
ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ –
ယောဟန် ၃:၁၆ ကိုဖတ်ပါ
(၁၀)သူခိုးသည်ခိုးခြင်း၊ သတ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းငှါသာ လာတတ်၏။ ငါမူကား၊ သိုးတို့သည် သက်လွတ်ရုံ မျှမက အထူးသဖြင့်အသက်နှင့် ပြည့်စုံစေခြင်းငှါ လာသတည်း။
သခင်ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘာပေးဖို့အတွက် လောကကိုလာခဲ့တာလဲ?
ကျန်ုပ်တို့တွေက အပြစ်နဲ့ပြည့်ပြီး ဘုရားနဲ့ကင်းကွာနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ် တို့ဟာဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အရာတွေ, ကျွန်ုပ် တို့အပေါ်ထားတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့အချစ်တွေကို မခံစားနိုင်, မသိရှိနိုင်ကြပါဘူး။
(၂၃)အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ လူအပေါင်းတို့သည် ဒုစရိုက်ကို ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အသရေ ပျက်ကြပြီ။
ရောမ ၆:၂၃, ၂သက် ၁:၈-၉ကိုဖတ်ပါ
(၂၃)အပြစ်တရား၏ အခကားသေခြင်းပေတည်း။ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကား၊ ငါတို့ သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ထာဝရ အသက်ပေတည်း။
(၈)ဘုရားသခင် ဆပ်ပေး၍ တရားသဖြင့် စီရင်တော်မူလိမ့်မည်။
(၉)ထိုသခင်သည် မိမိသန့်ရှင်းသူတို့အားဖြင့် ဂုဏ်အသရေတော် ထင်ရှားခြင်းကို၎င်း၊ ငါတို့သက်သေကို သင်တို့သည် ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍၊
ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ရတာလဲ? ဘယ်လိုကင်းကွာသွားတာလဲ?
သခင်ယေရှုသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တွေဖြေရှင်းနိုင်ဖို့တစ်ခုထဲသောအဖြေဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုအားဖြင့်သာလျှင် ကျွန်ုပ် တို့ဟာဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အရာတွေ, ကျွန်ုပ် တို့အပေါ်ထားတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့အချစ်တွေကို ခံစားနိုင်, သိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၃)ငါသည် ကိုယ်တိုင်ခံယူသည်အတိုင်း၊ သင်တို့အား ရှေ့ဦးစွာ အပ်ပေးသောအကြောင်းအရာဟူမူကား၊ ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူ၏။ (၄)သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှ၊ ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်တော်မူ၏။
(၅)ကေဖသည်ကိုယ်တော်ကို မြင်ပြီးမှ၊ တကျိပ်နှစ်ပါးသော သူတို့သည် မြင်ရကြ၏။
(၆)ထိုနောက် ညီအစ်ကိုငါးရာမက၊ တပြိုင်နက် မြင်ရကြ၏။ ထိုသူတို့တွင် အများသောသူတို့သည် ယခု တိုင်အောင် အသက်ရှင်ကြသေး၏။ အချို့တို့သည် အိပ်ပျော်ကြပြီ။
(၆)ယေရှုက၊ ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားကိုလည်းဖြစ်၏။ အသက်သည်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကို အမှီ မပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရ။ ၇သင်တို့သည် ငါ့ကိုသိလျှင် ငါ့ခမည်းတော်ကို မသိဘဲမနေကြ။ ယခုမှစ၍ ခမည်းတော်ကိုသိမြင်ကြ၏ ဟု မိန့်တော်မူ၏။
သခင်ယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးနောက်မှာတော့ ကျွန်ုပ်တို့ ဟာဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အရာတွေ, ကျွန်ုပ် တို့အပေါ်ထားတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့အချစ်တွေကို ခံစားနိုင်, သိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁၂)ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား၊ ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။
(၈)ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အလိုအလျောက် ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင် သနားတော်မူရာဖြစ်သတည်း။
(၉)ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှ ဝါကြွားစရာ အခွင့်မရှိ။
သခင်ယေရှုကိုလက်ခံရရှိပြီးပြီဆို ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အသစ်သောမွေးဖွားခြင်း လူသစ်ဖြစ်ခြင်း ကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁)ယုဒလူတို့တွင် အရာရှိဖြစ်သော နိကောဒင်အမည်ရှိသော ဖာရိရှဲတယောက်သည်၊
(၂)ညဉ့်အခါ ယေရှုထံတော်သို့လာ၍၊ အရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည်ပြတော်မူသော ဤနိမိတ် လက္ခဏာတို့ကို ဘုရားသခင်၏အခွင့်မရှိလျှင် အဘယ်သူမျှ မပြနိုင်သည်ကို အကျွန်ုပ်တို့သည်ထောက်၍၊ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်အထံတော်မှ ကြွလာတော်မူသောဆရာဖြစ်ကြောင်းကို သိကြပါ၏ဟုလျှောက်သော်၊
(၃)ယေရှုက၊ ဒုတိယမွေးခြင်းကို မခံသောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို မမြင်ရဟု ငါ အမှန်အကန်ဆိုသည်ဟု ပြန်၍မိန့်တော်မူ၏။
(၄)နိကောဒင်ကလည်း၊ အသက်ကြီးသောသူသည် မွေးခြင်းကိုအဘယ်သို့ခံနိုင်ပါမည်နည်း။ အမိဝမ်း ထဲသို့ တဖန်ဝင်၍မွေးခြင်းကို ခံနိုင်ပါမည်လောဟု လျှောက်၏။
(၅)ယေရှုကလည်း၊ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် မမွေးသောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ မဝင်ရဟု ငါအမှန်အကန်ဆို၏။
(၆)ဇာတိပကတိမွေးသောအရာသည် ဇာတိပကတိဖြစ်၏ ဝိညာဉ်တော်မွေးသောအရာသည် ဝိညာဉ် ဖြစ်၏။
(၇)ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံရမည်ဟု ငါဟောပြောသည်ကို အံ့ဩခြင်းမရှိနှင့်။
(၈)လေသည် အလိုရှိတိုင်းသွားလာ၏။ လေ၏အသံကို သင်သည်ကြားရသော်လည်း အဘယ်အရပ်က ဖြစ်သည်၊ အဘယ်အရပ်သို့သွားသည်ကိုမသိနိုင်။ ထိုနည်းတူ ဝိညာဉ်တော်မွေးသောသူဖြစ်သည်ဟု မိန့် တော်မူ၏။”
(၂၀)ငါသည်တံခါးရှေ့မှာရပ်၍ ခေါက်လျက်နေ၏။ အကြင်သူသည် ငါ၏အသံကို ကြား၍တံခါးကိုဖွင့်အံ့၊ ထိုသူရှိရာသို့ငါဝင်၍ သူနှင့်အတူ စားသောက်မည်။ သူသည်လည်းငါနှင့်အတူ စားသောက်ရလိမ့်မည်။
အကယ် ၍မိတ်ဆွေသခင်ယေရှုကိုသင့်ဘဝရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံရသေးဘူးဆိုပါက, ယခုလက်ခံလိုပါသလား?
သခင်ယေရှု, ကျွန်ုပ်ကိုချစ်ပေးတယ် , ကျွန်ုပ်ရဲ့များလှစွာသောအပြစ်တွေအတွက်ပေးဆပ်ရန် ကျွန်ုပ်ကိုယ်စားအသေခံခဲ့ပေးတဲ့အရာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါ , ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်နေရာယူပေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ,သခင်ယေရှု။
“ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူ အပေါင်း တို့သည် ပျက်ဆီးခြင်း သို့ မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။”